Hunhu uye kupatsanura kweiyo yekucheka reza / yekucheka disc, iyo chiyero chekushandisa kweiyo yekucheka reza.
Hunhu uye kupatsanurwa kweiyo yekucheka blade / yekucheka disc, iyo chiyero chekushandisa kweiyo yekucheka reza: Muhupenyu hwezuva nezuva, kana tikazviteerera, panowanzo kuve nekucheka maitiro mukushongedza imba. Inocheka pasi, simbi, huni, kana zvimwewo zvinhu kuchishuwo ...
Electric sando ikakuruma mhando yemagetsi muhombe sando chibooreso nechengetedzo batira yakasungirirwa ne pneumatic sando mashandiro.
Electric sando ikakuruma mhando yemagetsi muhombe sando chibooreso nechengetedzo batira yakasungirirwa ne pneumatic sando mashandiro. Iyo inogona kuvhura 6-100 mm maburi pazvinhu zvakaoma senge kongiri, zvidhinha, dombo, nezvimwe, zvine hunyanzvi hwepamusoro. ...
Hole opener, inozivikanwawo sehomba yemasaha kana gomba saha, inoreva kune yakasarudzika denderedzwa saha yekugadzira machira akatenderera mumabhizimusi emazuva ano kana mainjiniya. Zviri nyore kushanda, zviri nyore kutakura, zvakachengeteka uye zvinoshandiswa zvakanyanya. Izvo ...